मोबाइल् चार्जमै राखेर भिडियो हेर्दा जे भयो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मोबाइल् चार्जमै राखेर भिडियो हेर्दा जे भयो!
मोबाइल् चार्जमै राखेर भिडियो हेर्दा जे भयो!
admin October 2, 2020 समाचार	0
एजेन्सी – रोल्पामा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सुलिनस्मृति गाउँपालिका–१ घोडागाउँका ४३ वर्षीय भरत नेपाली रहेका छन् । उनको बिहीबार मोबाइल चार्जमै राखेर भिडियो हेर्दा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो । खाना खाएर छिमेकीको घरमा गएका नेपालीले मोबाइल चार्जमा राखेर भिडियो हेरिरहेका बेला निलाई करेन्ट लागेको बताइएको छ । समाचार सत्यसमाचार अनलाइनमा प्रकासित छ ।
करेन्ट लागेपछि गम्भिर घाइते भएका उनलाई उपचारको लागि प्यूठान लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको बिहीबार मोबाइल चार्जमै राखेर भिडियो हेर्दा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो । खाना खाएर छिमेकीको घरमा गएका नेपालीले मोबाइल चार्जमा राखेर भिडियो हेरिरहेका बेला निलाई करेन्ट लागेको बताइएको छ ।
सबैभन्दा जेठी नागरिकको घरमा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री र सांसद पुगेपछि…
नुवाकोट । नेपालकै सबैभन्दा जेठो नागरिक नुवाकोटकी बाटुली लामिछानेको घरमा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री नवराज रावत र बागमती प्रदेसका सांसद बद्री मैनाली लगायत जनप्रतिनिधिको टोली पुगेको छ । ३०औं अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवसको उपलक्ष्यमा बाला फाण्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन राज्यमन्त्री र सांसद नेपालकै जेठो नागरिक लामिछानेको घरमा पुगेका हुन ।
फाउण्डेसनले लामिछानेको घरको आँगनमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्यराज्यमन्त्री रावतलले राज्यलेसम्पूर्ण जेष्ठ नागरिकको सम्मान गर्ने बताए । नेपालकै सबैभन्दा बढी उमेरको नागरिकको दैलोमै आइएर सम्मान गर्न पाउँदा ज्यादै खुशी लागेको भन्दै उनले सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट सम्पूर्ण जेष्ठ नागरिकको सम्मानमा राज्यले कुनै कसर बाँकी नराख्नने बताए ।
त्यस्तै सोही क्षेत्र अर्थात बागमती प्रदेशसभाका सांसद बद्री मैनालीले जेष्ठ नागरिकको समाजको एउटा विश्वविद्यालय भएको भन्दै उहाँहरूबाट पछिल्लो पुस्ताले धेरै कुरा सिक्ने सक्ने बताए । उनले आफूले मासिक रूपमा जेष्ठ नागरिक लामिछोनलाइ ५ हजार रूपैयाँ दिनेगरेको बताए । उनले उक्त पाँच हजार आफनो तलबबाट कटाएर दिएको बताए ।
अलबिदा!! डा. हरि सापकोटा! सिङ्गो कर्णाली प्रदेशले तपाइलाई सम्झिने छ।
सेनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनमा दुई पाइलटको मृत्यु
फेरि आयो बम दिदि बहिनि को यस्तो चकित बनाउने खबर – भिडियो सहित
अनमोल केसी र सुहाना थापा ‘परान परान’ भन्दै यसरी नाचे (भिडियो)